भारत सरकारले कर बढाउँदा पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि, नेपाल के असर पर्ला ? – Clickmandu
भारत सरकारले कर बढाउँदा पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि, नेपाल के असर पर्ला ?
क्लिकमान्डु २०७७ फागुन ९ गते ११:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागिररहेको छ । कोरोनाका कारण पछिल्लो एक वर्ष संसारभर नै इन्धन खपतमा कमी आएको थियो ।
सोही कारण इन्धनको मूल्य असाध्यै तल्लो बिन्दुमा आइपुगेको थियो । पछिल्ला दिनमा कोरोनाको खोप आएका कारण आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । सोही कारण इन्धनको खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सोही कारण आर्थिक गतिविधिमा समेत तेज गति देखा परेको छ ।
नेपालमा विशेष गरी इन्धन भारतबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालले कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्नेतर्फ कुनै पनि ध्यान दिएको छैन । नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित देशले प्राप्त गर्ने लाभ समेत लिन सकेको छैन । भारतमा लगाइएको अत्यधिक करको मार नेपाली उपभोक्ताले समेत व्योहोर्नु परेको छ ।
त्यसो त नेपालमा पनि असाध्यै ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको छ । सोही कारण पेट्रोलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तशुल्कबाट कर लिने गरेको छ । सन् २०१४ को मेमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको सरकार गठन भयो । सो सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा मात्रै १० रुपैयाँ ३८ पैसा तथा डिजलमा ४ रुपैयाँ ५२ पैसा कर असूल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो करलाई अन्तशुल्को नाम दिइएको छ ।
मोदी सरकारले भारतमा १३ पटक त्यस्तो कर बढाएको छ । तर, पछिल्ला ७ वर्षमा मात्रै ३ पटक मात्रै कर घटाइएको छ । पछिल्लो पटक २०२० मा पुनः कर बढाइएको छ । सोही कारण पेट्रोलमा ३२ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजलमा ३१ रुपैयाँ ८३ पसा अन्तशुल्क लागेको छ । मोदी आए लगत्तै केन्द्र सरकारले पेट्रोलमा ३ गुणा तथा डिजलमा मात्रै ७ गुणा कर बढाएको छ ।
भारतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटदा भने उपभोक्तालाई छुट दिइएको छैन । मोदी सरकारका लागि लामो समयसम्म कच्चा तेलको मूल्यले साथ दिएको थियो ।
तर, मूल्य कम हुने बित्तिकै भने स्वचालित मूल्य भएपनि कम गरिएको थिएन । बरु उनले त्यसमा थप कर लगाइदिए । जब मोदी सत्तामा आए, तब उनले पेट्रोलमा मात्रै ३४ प्रतिशत, डिजलमा २२ प्रतिशत कर लगाए । सोही कारण पेट्रोलमा ६४ प्रतिशत र डिजलमा ५८ प्रतिशत कर लाग्यो । सोही कारण २०१४ को तुलनामा पेट्रोलमा दुई गुणा र डिजलमा अढाई गुणा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
अटल बिहारी वाजपेयीको शासनकालमा भारतमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ ७१ पैसामा बिक्री हुन्थ्यो । यस्तै डिजल भने २२ रुपैयाँ ७४ पैसा भारुमा बिक्री हुन्थ्यो । मनमोहन सिंहको पालामा पेट्रोल ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र डिजल ३२ रुपैयाँ ९२ पैसा भारुमा बिक्री वितरण हुन्थ्यो ।
पछिल्लो पटक सन् २०१४ देखि २०२१ मा आइपुग्दा मोदीकालमा भने अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । सन् २०१४ मा पेट्रोल ७१ रुपैयाँ ४१ पैसा र डिलज ५६ रुपैयाँ ७१ पैसामा थियो । अहिल आइपुग्दा सन् २०२१ मा पेट्रोल ९० रुपैयाँ ५८ पैसा र डिजल ८० रुपैयाँ ९७ पैसा पुगेको छ ।
आजभोलि त भारतमा समेत पहिलो पटक पेट्रोलको मूल्य लिटरमा नै १०१ भारुमा पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको मुनाफा २१५ प्रतिशत र भारत पेट्रोलियमको मुनाफा १२० प्रतिशत छ ।
सेयर बजारमा उछाल आउँदा कोरोनाकालमा नै चीनमा २५९ नयाँ अर्बपति थपिए
अमेरिकामा नयाँ कर कानून, अर्बपतिबाट ‘सम्पत्ति कर’ उठाएर कोरोना राहतमा
नेपालीलाई पनि मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा, मृतकका परिवारलाई आजीवन भत्ता
कोरोना महामारीमा ४२१ जना नयाँ अर्बपति जन्मिए, भारतमा मात्रै थपिए ४० जना